ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကုဂျိမ်းစ်အဲလစ်၊ FACS၊ FICS - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်သည် 'အင်တာနက် Porn နှင့် Erectile Dysfunction'
ဆီးလမ်းကြောင်းအထူးကု James Elist၊ FACS, FICS မှ 'Internet Porn နှင့် Erectile Dysfunction'
"ယခု 30 နှစ်ပေါင်းထက်ပိုမိုများအတွက်ပုဂ္ဂလိကလက်တွေ့တွင်ဖြစ်ခြင်း, ငါမြင်ကြရောဂါနှင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူများစွာသောလူတို့သညျကုသပါပြီ။ စဉ်တွင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED) တစ်ဦး "အဟောင်းကောင်လေးရဲ့ပြဿနာ" ဖြစ်လေ့မကြာသေးမီကကြိမ်ထဲမှာ " ပို. ပို. လူပျိုတို့ကို erectile ကိစ္စများ၏ဝေဖန်ပြောဆိုနေကြပါတယ်လျှင်အဖြစ်ပုံရသည်နှင့်ထိုပြဿနာများအတွက်ကုသမှုကိုရှာခြင်းဂျိမ်းစ် Elist, MD FACS တစ် Beverly Hills မှာဆီးရောဂါပါရဂူကပြောပါတယ်။
ငါ၏အကြောင်းပြချက်တောင်းဒေသခံစက္ကူများကချဉ်းကပ်ခဲ့ကြောင်း ED နှင့်ကုသမှုရွေးစရာများ (အထက်ပါအင်တာဗျူးတစ်ခု outtake ဖြစ်ပါတယ်) ။ အမှန်စင်စစ်အရင်ကထက်ပိုပြီးနုပျိုတို့ကိုကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းချက်တောင်း, ငါသည်လည်းသူတို့၏အစောပိုင်းနှောင်းပိုင်း 30 ရဲ့ပိုမိုယောက်ျားပိုကောင်းစိုက်ထူများအတွက်ဖြည့်စွက်အသုံးပြုနေသည်ကိုသတိထားမိကြပါပြီသွားရောက်ကြည့်ရှု။ အခုဆိုရင်အဘယျကွောငျ့ဒါကြောင့်လဲ?
အင်တာနက်က Porn နှင့်အစီရင်ခံစာများအတွက် Erectile အလုပ်မဖြစ်ညမညသဘောတရား:
၏ပြင်းထန်မှုကိုတိုင်းတာတစ်ဦးကမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှု ED အကူအညီရှာကြံအမျိုးသားများတွင်ငယ်ရွယ်အီတလီ၏ 48 ရာခိုင်နှုန်းကပြင်းထန်ခဲ့ကြောင်းထင်ရှား ED 40 ကျော်သူတို့အားသာ 40 ရာခိုင်နှုန်းခန့်နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ပါက။ အငယ်ယောက်ျားတွေ, ကျန်းမာသန်စွမ်းခဲ့ကြသည်ပိုမိုပါးလွှာနှင့်အဆင့်မြင့် testosterone ဟော်မုန်းရှိခဲ့ပါတယ်။ 2012 ထံမှနောက်ထပ်လေ့လာမှုလုလင် 30 ရာခိုင်နှုန်းအချို့ဒီဂရီကြုံနေရခဲ့ကြသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ ED.
1949 အတွက်ထုတ်ဝေသော Kinsey လေ့လာမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာ data တွေကိုအလွန်စိုးရိမ်ဖွယ်ရာဖြစ်ပါသည်: 12,000 ယောက်ျားများ၏အသေးစိတ်အင်တာဗျူးအပေါ်အခြေခံပြီး, အသက်အဘို့အ stratified, ပညာရေးနှင့်အလုပ်အကိုင်အသက်အရွယ်နှင့်အတူခွန်အားမရှိခြင်းတစ်ခုတိုးပွားလာမှုနှုန်းညွှန်ပြ။ ၎င်း၏ပျံ့နှံ့ 1 နှစ်ပေါင်းများ၏အသက်အရွယ်အားဖြင့် 19 ရာခိုင်နှုန်းကို3နှစ်ပေါင်းထက်လျော့နည်းခြင်းနှင့် 45 ရာခိုင်နှုန်း,7နှစ်ပေါင်းထက်လျော့နည်းယောက်ျား၏ 55 ရာခိုင်နှုန်း, အသက် 25 နှစ်အောက်အမျိုးသားများတွင် 75 ရာခိုင်နှုန်းကိုထက်လျော့နည်းအဖြစ်ကိုးကားခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုအပေါ်အခြေခံပြီး, 40 တစ်နှစ်ကြားရှိထက်အသက်ငယ်အတွက်ပညာရေးကျောထို့နောက်ပင်အစစ်အမှန်ပြဿနာမဟုတ်ခဲ့ပေ။
Porn နှင့် Erectile အလုပ်မဖြစ်အပေါ်နှိုးစက်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း:
အဓိကအကြောင်းရင်းတစ်ခုမှာအင်တာနက်ပေါ်မှလွှင့်ထုတ်လွှင့်ရန်လွယ်ကူသောဖြစ်ပုံရသော်လည်း၊ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု? အမှန်စင်စစ်, များစွာသောအမေရိကန်အခြေစိုက်ဆီးရောဂါပါရဂူများနှင့်စိတ်ပညာရှင် International မှစွဲ ပတ်သက်. နှိုးဆော်သံထမြောက်တော်မူခြင်းနှင့် လုလင်တို့သည်အတွက် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု။ သုံးပြီးတကယ်တော့, 20 နှင့် 30 ၏နံပါတ်နှစ်အရွယ် Viagra နှင့်တွဲဖက်။ , နောက်ဆုံးသောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းတိုးပွားလာယောက်ျားတွေဟာသူတို့ရဲ့ပြဿနာတွေသတင်းပို့နဲ့ငါ့ရုံးခန်းထဲမှာဒါပေမယ့်လည်းအများအပြားအင်တာနက်ဖိုရမ်များလေ့လာများနှင့်အပေါ်သူတို့ရဲ့မှီခိုထားပါတယ် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု မူးယစ်ဆေးဝါးများ။
တချို့ကဖြစ်ကောင်းပြောပါလိမ့်မယ်: ကအလုပ်လုပ်တယ်လျှင်အဘယ်အရာကိုပြဿနာလား ကောင်းပြီ, မှန်, အဖြေတစ်ခု၏လွယ်ကူသောဘယ်သူမှအားလုံးမှာသက်ဆိုင်ရာမည်ဖြစ်ကြောင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်? တကယ်တော့၏အစောပိုင်းအသုံးပြုမှုကြောင့် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုမူးယစ်ဆေးဝါးများ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှီခိုဖြစ်စေ, ဒါပေမယ့်လည်းအချိန်ပိုနှင့်အတူခန္ဓာကိုယ်ကနေလေ့တုံ့ပြန်မှုတုံ့ပြန်မှုမှာအားလုံးအချိန်ကျော်မျှသက်ရောက်မှုလျော့နည်းသွားပေမသာ။ သုံးပြီး Young ကယောက်ျားတွေ erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု မူးယစ်ဆေးဝါးများသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအားထိခိုက်စေရုံသာမကသူတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်စေပါသည်။ ဖြေရှင်းနည်းသည်ကုသမှုထက်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအစီအမံများနောက်တဖန်ဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ နှင့်အမူအကျင့်ပြောင်းလဲမှုပြန်လည်နာလန်ထူဆီသို့ ဦး တည်ပထမနှင့်အသင့်လျော်ဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ သတင်းကောင်းမှာယောက်ျားများသည်အင်တာနက်မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းကိုစွန့်လွှတ်သောအခါသူတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများသည်ယေဘုယျအားဖြင့်သူတို့ကိုယ်သူတို့နောက်ပြန်လှည့်စေသည်။ အချို့သည်လများလိုအပ်သော်လည်းငယ်ရွယ်သောအမျိုးသားများသည်အသက်ကြီးသူများထက်ပုံမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများလုပ်ရန်အချိန်ပိုလိုအပ်သည်။
အင်တာနက်က Porn နှင့် Erectile အလုပ်မဖြစ်မှစွဲ:
အဆိုပါ porn စားသုံးမှုပြင်းထန်မှုနှင့်အစောပိုင်းစတင်ခြင်း ED အပေါ်သက်ရောက်မှုအလေးပေးရန်အလို့ငှာငါတို့ရှိသမျှဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းရင်းများကိုစဉ်းစားရန်လိုအပ် ED ဖြစ်စေတဲ့.
အစောပိုင်းစတင်ခြင်းများအတွက်နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရင်း ED လုလင်တို့သည်လည်းဆေးလိပ်သောက်တူသောအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံအပန်းဖြေလှုပ်ရှားမှုများဖြစ်ဟန်, မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် အရက်အလွဲသုံးစားမှု။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောအလေ့အထများနှစ်ပေါင်းများစွာအမျှတိုးလာပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားဒြပ်စင်လုလင်တို့သည်ယေဘုယျအားဖြင့်အဘို့ရှိသမျှကိုစွန့်စားမှုအချက်များကင်းမဲ့အဖြစ်အခြားကျိုးကြောင်းဆီလျော်ရှင်းပြချက်ဖြစ်ဟန် ED ထိုကဲ့သို့သောသွေးကြောယိုယွင်းသို့မဟုတ်အထက်အမျိုးသားများတွင် ED ဖြစ်ပေါ်စေလေ့သောအခြားရောဂါများကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လူပျိုတို့အတွက်ဆေးလိပ်သောက်အနိမ့်တစ်ဦးလုံးကိုအခြိနျမှာဖြစ်ပြီး, မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်မူးရူးသောက်စားလည်းငယ်ရွယ်လူကြီးများအတွက်ကျဆင်းသွားပါပြီ။
အစောပိုင်းစတင်ခြင်း ED ထိခိုက်တစ်ခုမှာအခြားအအချက်ပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်စွဲပါဝင်သည်ရာစိတ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများဖြစ်လိမ့်မယ်။ စသည်တို့ကိုအာရုံစူးစိုက်မှုဒုက္ခ, စိတျအပွောငျးအလဲ, စိုးရိမ်စိတ်, အိပ်ပျော်ခြင်းမမှန်, စိတ်ကျရောဂါ, အပျြောအပါးတုံ့ပြန်မှုလျော့နည်းသွား: စွဲတစ်ခါတစ်ရံသည်အခြားစိတ်ကျန်းမာရေးချို့ယွင်းတူတဲ့ကြောင့်ရောဂါလက္ခဏာတွေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်
အင်တာနက်က Porn နှင့် Erectile အလုပ်မဖြစ်ကုသမှုမှစွဲ:
အထက်ပါထုတ်ပြန်ကြေညာချက်, အပန်းဖြေမူးယစ်ဆေးဝါး, ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း, စိတ်ကျန်းမာရေးအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိသည့်အတိုင်းအစောပိုင်းစတင်ခြင်း ED တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်ခြင်းဒြပ်စင်များ၏သေးငယ်သောအဘို့ကိုမဟုတ်ဘဲတက်အောင်ခံရဖို့, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုမှနှိုင်းယှဉ်ပုံရသည်။
အနည်းဆုံးနောက်ဆုံးသော်လည်းမ, porn များအတွက်ဖြေရှင်းနည်းအဘယျသို့သွေးဆောင်သည်ကို ငယ်ရွယ်အထီးအတွက်ပညာရေး လူဦးရေ?
ရုပ်သိမ်းရေးနှင့်ဖြတ်တောက် porn စားသုံးမှုသင့်လျော်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ function ကိုပြန်များအတွက်အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ဟန်ရှိသည်။ သင်သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်သည့်အခါတစ်ဦးစိုက်ထူခြင်းနှင့်သုက်အောင်မြင်ရန်နိုင်ပေမယ့်လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာ, သင် porn သွေးဆောင်ငယ်ရွယ်စတင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်. စိုးရိမ်ပူပန်ဖြစ်သင့်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့မတတ်နိုင်သည်ဆိုပါက ED။ porn ဖြတ်တောက်ခြင်းအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများပြသနိုင်ဖို့လပေါင်းများစွာ ယူ. တခါတရံ ပို. ပင်ဖြစ်နိုင်သည်။ သငျသညျအထကျမဆိုသတိပြုမိကြပါလျှင်မည်သို့ပင်အသက်အရွယ်နှင့်ကြာချိန်၏, ကသင်ကို PC ကို turn off နှင့်ဖြစ်နိုင်သည်အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်အကြံဉာဏ်တစ်ဦးတိုင်ပင်မြင်နေစဉ်းစားရန်အဘို့အအချိန်ဖြစ်ပါသည်။